QORMADA JIMCAHA: Maxaa ka Jira inay MUSLIMIIN yihiin Henry iyo Van Persie????? – Gool FM
QORMADA JIMCAHA: Maxaa ka Jira inay MUSLIMIIN yihiin Henry iyo Van Persie?????
Byare March 9, 2018
(Europe) 09 Maarso 2018. Waxaan Qodobka Jimcahan uga hadleynaa Sheeko jah wareerisay dadka ee ku aadan Diinta ay hestaan Weeraryahannadii hore ee Arsenal Thierry Herny iyo R. Van Persie.
Dad badan ayaa aaminsan in labada Laacib ay Muslimiin yihiin balse ma ahan Muslimiin inkastoo ay jecel yihiin Diinteena.
Haddaba Aqriso maxaa ka run ah in labada laacib ay heystaan Diinteen Islaamka:
Dad Badan ayaa aaminsan inuu Muslim yahay dhaliyihii hore ee Arsenal iyo Manchester United ee dhawaan dib ugu laabtay kooxdiisa yaraanta ee Feyenoord.
Laakiin sheekadaasi waa mid runta ka fog oo ma ahan Muslim, wuxuu qabaa gabar Muslimi ah oo u dhalatay dalka Morocco oo lagu magacaabo Bushra.
Laakiin wuxuu isagu afkiisa ka yiri: “Ma ihi Muslim, ma ihi Christian mana ihi Jew.”.
Thierry Daniel Henry, waa laacib u dhashay Faransiiska oo ciyaaraha ka fariistay kaddib markii uu u soo ciyaaray Monaco, Juventus, Barcelona, New York Red Bulls iyo Sideed sano uu ku soo qaatay Arsenal.
Dad badan ayaa aaminsan inuu Muslim yahay, yeelkeede ma jiraan wax xaqiijiyay warbixintaas oo Laacibkana ma xaaqiijin isla markaana laguma xaqiijin ilo wareedyo lagu kalsoon yahay.
Laakiin warar aan xaqiiqdooda la hubin ayaa horey u sheegay in Henry uu dareemayo in Diinta Islaamka ay kaga dhow dahay Diimaha kale, isla markaana uu aad u tix galiyo saaxiibadiisa Muslimiinta ah. Haddii ay noqotana inuu qaato Diin ay noqon doonto Diinteena Islaamka.
Elman oo ku Ciil baxday Gaadiidka
Dani Alves oo ka jawaabay eedeyntii loo soo jeediyay ee ahayd inuu DIIF ku tiray Ronaldo